टप नेपाली जोक्स – Top Nepali Jokes – Page5– MeroJilla.com
ससुरालिमा ज्वाइलाइ किन त्यति धेरै सम्मान गर्छन ? Monday, August 22nd, 2016
पति पत्नीले दुबैको आमालाई सम्मान गर्नु पर्छ
एक दिन श्रीमान घर आउँदा निकै अबेर भएछ । अनी घर आएर ढोका बाट भित्र छिर्न न पाउदै श्रीमतिले भनिछन । श्रीमति- कहाँ जानु भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरी सोधे । हजुर त आज अफिस पनि जानु भएन रे । के हो एस्तो चाला ? अनि यो हातमा भएको झोला कस्तो गनाई रहेको छ । के हो यो ? श्रीमान- म.. म... म आमालाई लिन गएको थिए । आमा अब एही बस्नु हुन्छ । यो झोला आमाको हो । एस्मा आमाको कपडा..
जोक्स – रोमांस रातको नौ बजेबाट सुरु Wednesday, August 17th, 2016
रीताले आफ्नो साथीसँग कुरा गर्दै भनिन्, “ तिम्रो श्रीमान कसरी आउँछन् समयमै ? सीता : मैलै एउटा नर्मल नियम बनाएकी छु । रीता : त्यो कस्तो नियम हो, भनन् ? सीता : मैले श्रीमानलाई भनेकी छु । रोमांस रातको नौ बजेबाट सुरु हुन्छ । चाहे तिमी घर आउ या नआउ ।..
जोक्स – श्रीमतीको मुखमा थर्मोमिटर
डाक्टरले शेरेको श्रीमतीको मुखमा थर्मोमिटर राखेर केहीबेर मुख बन्द गर्न सल्लाह दिए । श्रीमतीलाई चुप देखेर शेरले डाक्टरलाई भन्यो – डाक्टर साहब यो कति रुपैयाँमा आउछ ..
जोक्स – पाँच किलोमिटर टाढा बाट FLYING kiss Wednesday, August 3rd, 2016
मेरो बाबा र ममिको LOVE परेको बेलामा बाबाले पाँच किलोमिटर टाढा बाट FLYING kiss दिँदा ममि यता लाजले भुतुक्क पर्नु हुन्थ्यो रे ... . जमाना धेरै अगाडि गएछ आजभोलिका केटिलाइ प्रिय' म तिम्रो हातमा चुम्छु है भन्यो जवाफ यस्तो पाईन्छ..... . " तँलाई मुर्दार के मेरो ओठमा बिष लागेको छ र हातमा चुम्नु पर्यो "..
जोक्स – शेरेको नोकर्नीले कप खसाली छे
शेरेको नोकर्नीले कप खसाली छे । शेरेको बुढीः"तलाई नखरमौली । त्यति कप समाउन नि सकिनेस्?" त्यो कुरा सुनेर छोरोले भनेछः"आमा नखरमौली भनेको के हो?" छोरोलाई नराम्रो कुरा सिकाउनु हुन्न भनेर शेरेको बुढीले भनिछेः"बाबु नखरमौली भनेको बलियो हो ।" फेरि अर्को दिन पनि नोकर्नीले कप खसाली छे । शेरेको बुढीः"तलाईँ रण्डी आज पनि कप फुटाइस् ।" छोरोः"आमा रण्डी भनेको के हो?" शेरेको बुढीः"कमजोर हो..
चुडकिला – पहिलो वर्ष देखि ५ औं बर्ष सम्म श्रीमान श्रीमती Monday, May 30th, 2016
पहिलो बर्ष श्रीमतीः खाना खानुस, धेरै बेर भयो, तपाइले केही खानु भएन ? दोस्रो वर्षः खाना तयार छ, पस्कि दिउँ ? तेश्रोवर्षः खाना बनिसकेको छ । कतिखेर खान मन हुन्छ भन्नु होला । चौथोवर्षः खाना बनाएर राखिदिएको छु । म बजार जान हिँडे । आफै निकालेर खानु होला । पाँचौ वर्षः आज मलाइ अल्छि लागेको छ । खाना होटलबाट ल्याउनु होला । छैटौवर्षः जतिखेर पनि खाना खान्छु भन्नु हुन्छ । विहान खानु भएको हैन..
टप नेपाली जोक्स – तीन मानिस मरेपछि भगवानको घर Tuesday, May 10th, 2016
तीन मानिस मरेपछि भगवानको घर पुग्छन् । मरेपछि उनीहरु सबै स्वर्ग नै जान चाहन्थे । पहिलो व्यक्ति पुजारी थिए, उसले भगवानसँग भन्छ ‘मैले त तपाईको धेरै सेवा गरेँ, मलाई स्वर्ग पठाइदिनुहोस्’ । भगवान भन्छन् ‘मेरो चम्चागिरी गर्छस्, यसलाई नर्क लैजाओ’ । दोस्रो व्यक्ति नेता थिए उसले भन्छ “मैले जीवनभर समाजसेवा गरेँ त्यसैले मलाई स्वर्ग पठाइदिनुहोस्’ । भगवान भन्छन् ‘नेतागिरी गर्छस्, यसलाई..
टप नेपाली जोक्स – गोजीमा रहेको श्रीमतीको फोटो हेर्छु
शेरेले बारमा पुगेर एक गिलास रक्सि माग्यो । एक गिलास सकेपछि उ फेरि कमिजको गोजीमा हेरेर फेरि अर्को गिलास रक्सि मगाउथ्यो । उसले धेरै पटक गोजीमा हेर्दै रक्सि मागाउँदै गरेको देखेर हैरान परेको वेटरले सोध्यो । वेटर ः साथी, म तिमीलाई जति माग्छौं त्यति रक्सि दिनेछु । तर, यति मात्रै भन्देउ, रक्सि माग्नु भन्दा पहिले तिमी किन गोजिमा हेरेर मात्र रक्सि मागाउँछौ ? वेटरको प्रश्न सुनेर..
को हुन् त टप नेपाली जोक्स ( Top Nepali Jokes ) मा छाउने सेरे Saturday, April 2nd, 2016
‘ट्रोल पिक’ यो शब्द पक्कै पनि सामाजिक संञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले सुन्नु भएकै होला । यसमध्ये सबैभन्दा प्रसिद्ध माथिको तस्बिर धेरैले देखेकै हुनु पर्छ । नेपाल कै चर्चित पेज Top Nepali Jokes मा सर्बाधिक प्रयोग हुने ट्रोल पिकमा पनि अधिकांस यिनै पर्छन । तस्बिरसँग रमाइला जोक्स तथा भनाइहरु पनि राखिएको यो फोटोमा भएको अनुहार कोसँग मिल्छ भन्ने सबैमा खुलदुली होला । मंगोलियन अनुहार भएको उक्त..
चुडकिला – मर्न भनेर त्यो रक्सीमा प्वाइजन मिलाएको थिएँ, त्यो पनि तिमीले.. Sunday, March 27th, 2016
एउटा जँड्ह्या बारमा बसेर अगाडी राखेको रक्सीको गिलास घण्टौंदेखि एकटक हेरिरहेको थियो । त्यो देखेर उसलाई जिस्काउन वेटरले त्यो रक्सी एकैसासमा स्वाट्ट पार्यो । जँड्ह्या रुन थाल्यो, वेटर : सरी दाई, मैले त तपाइँलाई जिस्काउन पो खोजेको..! जँड्ह्या : हैन भाई, यसमा तिम्रो गल्ती छैन । आजको दिन नै अनलक्की छ । जागीर गयो, स्वास्नी पनि सम्पत्ति कुम्ल्याएर भागी त्यसैले मर्न भनेर त्यो रक्सीमा..